Ilhaan Cumar waxay weli la dagaallamaysaa Dimuqraadiyiinta Yuhuudda | Somalisan.com
Home Afsomali Ilhaan Cumar waxay weli la dagaallamaysaa Dimuqraadiyiinta Yuhuudda
Wakiilka Ilhan Omar (D-Minn.) Waxay muran kala dhaxeysaa Yuhuuda Aqalka Dimuqraadiga ee ku saabsan Israel – markale.
Daraasiin Dimoqraadiyiin Yuhuud ah oo taageera Israel ayaa si cad gadaal uga riixaya Omar, oo ah qaxooti Soomaaliyeed oo ka mid ah labada gabdhood ee Muslimka ah ee ugu horreeya ee loo doorto Koongareeska, isagoo u muuqday inuu isbarbardhigayo Mareykanka iyo Israel iyo Xamaas iyo Taalibaan halka laga wada hadlayo dambiyada dagaal.
“Ku ekeysiinta Mareykanka iyo Israel Xamaas iyo Taalibaan waa mid weerar ah sida ay u qaldan tahay. Inaad iska indhatirto kala duwanaanshaha u dhexeeya dimoqoraadiyada ay xukumaan sharciga iyo ururada la quudhsado ee ku lug leh argagixisanimada ugu wanaagsan ee sumcadda qofka dooddiisa loola jeedaa ugu xumaana waxay ka tarjumaysaa nacayb qoto dheer, , oo xulafo la ah Israaiil, ayaa lagu yiri bayaan wadajir ah.
Kooxda ayaa sidoo kale ugu baaqday Cumar inuu “caddeeyo” ra’yigeeda.
“Mareykanka iyo Israel waa kuwo aan dhammeystirnayn, sida dhammaan dimoqraadiyadaha, mararka qaarkood waxay mudan yihiin in la naqdiyo, laakiin u dhigma been abuur ah ayaa daboolaya kooxaha argagixisada,” ayay yiraahdeen sharci-dajiyayaasha. “Waxaan ka codsaneynaa Congresswom Omar in ay caddeyso ereyadeeda ay dhigeyso Mareykanka iyo Israel. la mid ah Xamaas iyo Taalibaan.
Kow iyo tobanka kale ee Dimuqraadiga ah ee ku saxeexday bayaanka Schneider waa Gudoomiyaha Garsoorka Jerry Nadler (NY), Gudoomiyihii hore ee Gudiga Qaranka ee Dimuqraadiga Debbie Wasserman Schultz (Fla.), Dhibaatooyinka xalinta dhibaatooyinka Caucus Co-Chair Josh Gottheimer (NJ), Gudoomiyaha Gudiga Anshaxa Ted Deutch (Fla.) Iyo Rep. Jake Auchincloss (Mass.), Lois Frankel (Fla.), Elaine Luria (Va.), Kathy Manning (NC), Dean Phillips (Minn.), Kim Schrier (Wash.) Iyo Brad Sherman (Calif.)
Muranka ayaa billowday markii Cumar uu su’aalo weydiinayay Xoghayaha Arrimaha Dibadda Antony Blinken intii lagu guda jiray dhageysiga Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Isniintii oo ku saabsan baaritaannada Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ee ku saabsan dambiyada lagu soo eedeeyay Taliban iyo Mareykanka ee Afghanistan, marka lagu daro eedeymaha ka dhanka ah Xamaas iyo Israel ee xiisadda Gaza. .
“Waa inaan la nimaadnaa isla xisaabtan iyo cadaalad dhamaan dhibanayaasha xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha. Waxaan aragnay xasuuq aan loo maleyn karin oo ay gaysteen Mareykanka, Xamaas, Israel, Afghanistan, iyo Taalibaan,” Omar ayaa ku qoray qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka horaantii todobaadkan. fiidiyowga su’aalaheeda. “Waxaan weydiiyay @SecBlinken halka ay tahay in dadku u aado caddaalad.”
Sherman, xubin sare oo ka tirsan Guddiga Arimaha Dibadda ee Aqalka, ayaa ku saxiixday qoraalka wadajirka ah laakiin waxay soo saartay xitaa dhaleeceyn aad u badan oo kaligeed ah oo ku saabsan Cumar kaligeed.
“Ma ahan war sheegaya in Ilhaan Cumar ay hadalo naxdin leh oo cad oo been abuur ah ka sheegayso America iyo Israel. Waxa warka mudan waa in ay qirato in Xamaas uu dambi ka galay ‘xasuuq aan loo maleyn karin.’ Waxaa la joogaa waqtigii dhammaan qadaflayaasha Israa’iil ay cambaareyn lahaayeen Xamaas. Waxaana la joogaa waqtigii dhammaan kuwa wanaagga jecel inay diidaan wax u dhigma anshax u dhexeeya Mareykanka iyo Israa’iil oo dhinac ah, iyo Hamas iyo Taliban dhinaca kale, ”Sherman ayaa ku tiri hadal ay soo saartay.
Laakiin Omar, oo xubin ka ah kooxda midabada haweenka horumarka leh ee loo yaqaan “kooxda”, ma muujineyso wax calaamado ah inay dib uga laabaneyso.
Wax yar ka dib Schneider ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka abbaare 11-kii fiidnimo. Arbacadii, Cumar waxay barteeda Twitter-ka ugu yeertay asxaabteeda “ceeb” markii ay soo saareen bayaan ay ku dhaleeceynayaan iyada halkii ay toos ula hadli lahayd. Waxay kaloo si maldahan usheegtay in xildhibaanada asxaabteeda ah ay yihiin kuwa aad uxun oo ka soo jeeda xagjirnimada ka dhanka ah muslimiinta ee iyada ka dhanka ah.
“Waa wax laga xishoodo asxaabteyda i soo wacda markay ii baahdaan taageeradayda inay hadda soo saaraan qoraal ay ku codsanayaan ‘caddeyn’ oo aan kaliya soo wicin,” ayuu Cumar ku qoray qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo uu ugu jawaabayay Schneider.
“Koobabka islamophobic ee bayaankan waa kuwo xadgudub ah,” ayuu Cumar sii waday. Dhibaateynta & aamusnaanta joogtada ah ee ka imanaya saxiixayaasha warqaddan waa mid aan loo dulqaadan karin. ”
Cumar waxay la xiriirtay Dimuqraadiyiinta abaabulka bayaankan wadajirka ah ka hor inta aan loo sii deyn si ay u bixiso “caddeyn,” laakiin wicitaanadeedii lama soo celin, sida laga soo xigtay xafiiskeeda. Xafiiska Schneider kama uusan jawaabin codsi faallo ah.
Hogaamiyaha laga tirada badan yahay ee aqalka Kevin McCarthy (R-Calif.) Wuxuu ugu yeeray afhayeenka Nancy Pelosi (D-Calif.) Inuu “ficil” ka jawaabo faallooyinka Omar, laakiin ma uusan cadeyn wuxuu u maleynayo in la sameeyo.
“Rep. Cumar naceybkiisa Yuhuudda & Mareykanka naceyb waa karaahiyo. Afhayeenka Pelosi ayaa wali ku guuldareysatay inay wax ka qabato arrimaha ku saabsan kooxdeeda, waxay farriin u direysaa adduunka oo ah in Dimuqraadiyiintu ay u dulqaadan karaan nacaybka Yuhuudda oo ay u naxariisanayaan argaggixisada, ”ayuu McCarthy ku soo qoray khamiistii. “Waxaa la joogaa waqtigii Afhayeenka uu wax ka qaban lahaa.”
Laakiin Guddiga Qaranka ee Xisbiga Jamhuuriga, Golaha ololaha ‘House GOP’, wuxuu ugu baaqayaa Dimoqraadiyiinta inay dalbadaan in Cumar laga saaro Guddiga Arrimaha Dibadda.
Afhayeen u hadlay Pelosi isla markiiba kama uusan jawaabin weydiinta ka timid The Hill.
Rep. Rashida Tlaib (D-Mich.), Oo ah haweeneyda kale ee Muslimka ah ee loo doorto Koongaraska, ayaa timid difaaca Cumar.
Waan ka daalay asxaabteyda (labadaba D + R) jinka @IlhanMN. Jahwareerkooda ay ku hayaan booliska iyada ayaa xanuunsan. Waxay leedahay geesinimo ay ku baaqeyso xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha iyadoo aan loo eegin cidda mas’uulka ka ah. Taasi way ka fiican tahay saaxiibbada indhaha ka fiiriya haddii ay u adeegayso siyaasaddooda, ”ayuu Tlaib ku soo qoray Twitter-ka.
Alexandria Ocasio-Cortez (D-NYY), oo ah xubin kale oo horumar leh, ayaa sheegtey in Dimuqraadiyiinta ka doodaya hadalada Omar ay ahayd inay si gaar ah u xaliyaan halkii laga dhigi lahaa inay bartilmaameed weyn ka dhigtaan hanjabaadaha.
“Aad u xanuunsan & daallan cayda joogtada ah, dhaqan xumida ula kac ah, iyo bartilmaameedka dadweynaha ee @IlhanMN ee ka imanaya kuligeena. Wax fikrad ah kama hayaan halista ay iyada gelinayaan iyagoo ka booday wada sheekaysiga khaaska ah & u boodida sii hurinta wareegyada wararka bartilmaameedka ah ee ku xeeran,” Ocasio-Cortez ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay.
Ma ahan markii ugu horreysay oo ay Cumar si cad ula dagaallanto Yuhuudda iyo Israa’iil xubnaha ka tirsan xisbigeeda.
Sannadkii 2019, Aqalka ayaa soo saaray go’aan lagu cambaareynayo Yuhuud nacaybka, cunsuriyadda iyo Islaam nacaybka ka dib markii Cumar uu su’aal ka keenay ololeyaasha u ololeeya Israa’iil oo ah “saamayn siyaasadeed oo waddankan ka jirta oo leh waa caadi in lagu riixo daacad u noqoshada dal shisheeye,” oo ah dareen la arkay by badan oo ku saleysan trope ah antisemitic trope.
Cumar ayaa sidoo kale ka carooday qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka in taageerada siyaasiyiinta Mareykanka ee Israa’iil ay tahay “wax walba oo ku saabsan Benyaamiinnada,” taas oo sidoo kale loo arkay inay tahay mid naceyb u ah ka qeyb qaadashada koobabka ku saabsan dadka Yuhuudda ah ee adeegsanaya lacagta saamaynta.
Cumar ayaa Khamiistii sheegtay inay heleyso hanjabaado dil ah. Waxay soo dhigtay cod qof dhahaya: “Muslimiinta waa argagixiso. Iyaduna waa raghead n *****. Iyo qayb kasta oo ka mid ah sh-shuuci-naceyb Mareykan ah oo iyada u shaqeysa, waxaan rajeynayaa inaad heleyso waxa kugu soo dhacaya.
TW: Mar kasta oo aan ka hadlo xuquuqda aadanaha waxaa igu soo qulqulaya hanjabaado dil ah. Waa tan mid hadda aan helnay.
“Muslimiinta waa argagixiso. Iyaduna waa raghead n *****. Iyo qayb kasta oo ka mid ah sh-shuuci-naceyb Mareykan ah oo iyada u shaqeysa, waxaan rajeynayaa inaad heleyso waxa kugu soo dhacaya.
Previous articleWasiirka warfaafnta oo eedeyn iyo hanjabaad la isugu darey
Next articleVIDEO Sheikh Rusheeye Yare oo Muqdisho ka hirgaliyey Xarunta Cilaajka Dhaqan celinta daarul towba
Diyaarad qaas ah oo Muqtaar Roobow ka dajisay Magaalada Muqdisho